Kugadzira Mapurojekiti - BXL Yakagadzira Packaging
Zvizoro Chikafu Doro Zvishongo Mafuta Kenduru Inonhuwirira
BXL Kugadzira kunoshanda zvinhu zvitsva, zvivakwa zvitsva & matekinoroji matsva, senge anti-counterfeiting, 3D UV, 3D embossing, optical grating pateni, uye thermochromic inks nezvimwe, kune yekushongedza ekupakata dhizaini uye kugadzira, ichiita imwe-ye-ye-mhando .
Panguva imwecheteyo, yekuchengetedza-inoshamwaridza kurongedza iri kutorawo chikamu chikuru. BXL inoita basa rakakura kuyananisira dhizaini dhizaini dhizaini, mashandiro & nezvayo eco zvido.
BXL Kugadzira inopa chikafu-giredhi zvinhu, FDA-inogamuchirwa & eco mapakeji mhinduro kune epamusoro-magumo chikafu vatengi vese vepamba nekune dzimwe nyika. Paunenge uchizadzisa chinoshamisira pasuru yekutarisa, BXL haina kukanganisa pane kuchengetedzeka kwekudya kunetsekana.
Waini & midzimu kurongedza ndeimwe yebhizinesi rakakosha reBXL. Kunyanya kumusika weChina musika, BXL Creative ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa mapakeji emakambani & vagadziri, vachipa vatengi ne-turn-kiyi chigadzirwa mhinduro, inovhara kubva mukugadzira iyo nyowani nyowani brand kubva kumusika kutsvagisa, kufunga, kutumidza zita, chiratidzo chinzvimbo, kushambadzira mazano, dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini, nezvimwe.
Parizvino, 80% yezvigadzirwa zvemakambani ekushongedza zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope neNorth America. Iine ruzivo rwakafuma mukushambadzira mashandiro uye OEM & ODM manejimendi manejimendi, BXL inogona kusangana zvese zvekupakata zvinodiwa kune vatengi.
BXL Kugadzira ine rakasiyana-siyana bhizimusi rekupakata bhizinesi, mune iyo pefiyumu / kunhuhwirira ndechimwe chezvikamu zvikuru. Vatengi kazhinji vanobva kuEurope, North America, Mid-East, Australia, nezvimwe.
BXL Yakasikwa ine makore mazhinji echiitiko mukugadzirwa kwepasi rose kunonhuwirira kuputira kenduru, kubvira bhizinesi rayo repasi rese parakatanga. Kusvika parizvino, vatengi vanofukidza mazhinji emabhizimusi anozivikanwa mhando.
Petite Inotonhora Snowflake
Inogona kuzadzikisa kutsemuka kwechando kupera. Kana ikasanganiswa ne graphic dhizaini, inogona kugadzira yakasarudzika deco kutaridzika.
Izvo zvakanyatsojeka uye chaizvo kupfuura zvakajairwa zvinopisa sitampu. Iyi deco inogadzirwa yakanangana netudiki-diki, mitsara yakaonda, madhi, mavara & mapatani, ayo asingagone kuitwa nesitampu inopisa. Inogona kuwana yakaomesesa foil stamp yekupedzisa ine yakanyanya inoshanda uye chaiyo positioning. Inotaridzira kunaka kweiyo pateni, kunaka, kunaka, matanda akawanda uye kufarira.
Maitiro aya anowanikwa nekubatanidza silika skrini ine inopisa yekupwanya. Iyo inonatsa zvakakwana dhizaini deco ine simbi yekupedzisa, iyo inopa iyo patten neyakagadziriswa simbi mameseji, kuunza ine simba yekuona kukanganisa uye 3D esimbi kutarisa.
Kana gwapa UV rikasangana ne3mhedzisiro, iyo inonunura kubata kukuru uye kunoonekwa kwehunhu.
Kugadzira shanduko inochinja, kuwana simba rekuona.
Nekupisa-kumanikidza, mapatani uye mitsara inoshandurwa pamusoro pepepa, ichichinja pepa ruvara kuti rive mwenje nemumvuri musiyano kubva wepamberi pepavara, izvo zvinowedzera chimiro uye ruoko rwekunzwa kwepakeji.
Yakawedzera-yakadzika 3D Embossing
Kune mapatani & mairafu ayo anoshuvira kuwana yekuwedzera-yakadzika 3D emboss yekupedzisa nhete neyakagadzika uye nekugadzira yakasimba yekuona maitiro, BXL Creative inogona chaizvo kukuitira iwe.
Embossing angazvidzvisa Paper Label kutsiva simbi chitaridzi
Iyo yakajeka mitsara mapatani ane concave uye convex akaturikidzana uye ruoko feelis rakabuditswa kubva kune yakajairika bepa-base composite zvinhu kuburikidza neyakajeka mwenje vhezheni vhezheni kuburitsa mhedzisiro yehupfumi kupfeka, chinonaka uye zvakawanda zvemukati, saka iyo inofananidzwa yakasimba simbi mameseji uye anoonekwa maitiro.
Yakasarudzika Pateni Texture
Maitiro aya anowanikwa nekusimbisa. Kusarudzika kusarudzika kwemitsara dzakasiyana kunogona kuitwa kwekufananidza kumusoro. Kubudikidza nemaitiro epanyama, mufananidzo unogoneswa kutora matatu-epamhepo akasarudzika kusagadzikana uye yakajeka pateni mitsara, inogadzira kunaka, kupesana kwakapinza uye ruoko rwakanaka kunzwa Yayo chaiyo yekukanganisa mitsara ine yakajeka uye ine yakasimba yekuona maitiro.